NLD အစိုးရ သက်တမ်းပြည့်မလား? (A KP Appraisal) – အခါပေး ဗေဒင်
NLD အစိုးရ သက်တမ်းပြည့်မလား? (A KP Appraisal)
akhapaybaydin7Sep 2017 24 Apr 2019 Uncategorized
Date: 6.9.2017 (Wed)
Time: 04:02: 41
Horary No. 117 (Out of 249)
Query: NLD အစိုးရ သက်​တမ်းပြည့်​မလား?
အစိုးရတစ်​ခု သက်​တမ်းပြည့်​မပြည့်​ကို ဆုံးဖြတ်​မယ်​ဆိုရင်​ အလုပ်​၊ သြဇာအာဏာနဲ့ဆိုင်​တဲ့ ၁၀-တန့်​ CSL က​နေ ဆုံးဖြတ်​ရပါမယ်​….
ယခုဟူးရားဇာတာမှာ ၁၀-တန့်​ CSL သည်​ ရာဟုနက္ခတ်​၊ ​သောကြာ ဘုတ္တိနက္ခတ်​တွင်​ ကျ​ရောက်​​နေ ပါတယ်​…. ​သောကြာသည်​ ၁၁-တန့်​ဘာဝမှာရပ်​တည်​ပြီး ၁၁-တန့်ဘာဝမှာ ရပ်​တည်​​နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်​ပိုင်​နက္ခတ်​ကို စီးထားပါတယ်​….
၁၁-တန့်​ဘာဝသည်​ စာချုပ်​သက်​တမ်းကိုပြည့်​​စေတဲ့ ဘာဝဖြစ်​ပါတယ်​… ဥပမာ- သ​င်္ဘောသား​တွေဆို စာချုပ်​ပြည့်​လုပ်​ကိုင်​ရတာမျိုး၊ လူမမာဆိုယင်​ သက်​တမ်း​စေ့​နေရတာမျိုး​၊ နိုင်​ငံခြားမှာ အလုပ်​သွားလုပ်​မယ့်​သူတွေဆို စာချုပ်​ပြည့်​လုပ်​ကိုင်​ရတာမျိုး​တွေကို ​ကိုယ်​စားပြုပါတယ်​….
(အိုဘားမား သက်​တမ်းပြည့်​လုပ်​ကိုင်​ရမယ်​ဆိုတာ Blog ထဲမှာ ကြို​ဟောဖူးပါတယ်​…)
ဒါ့​ကြောင့်​ NLD အစိုးရ ၂၀၂၁ အထိ သက်​တမ်းပြည့်​ လုပ်​ကိုင်​ရပါလိမ့်​မယ်​…. No doubt!
Checking with Guibarga (ဂူဗာဂါး) Theory
ဆရာကြီး KSK ကွယ်​လွန်​ပြီး ​ပေါ်​ပေါက်​လာ​သော သီအိုရီဖြစ်​ပါတယ်​… ဟူးရားနံပါတ်​လဂ်​ရဲ့ CSL သည်​ လဂ်​စီးနက္ခတ်​ (သို့) စန်းစီးနက္ခတ်​နှင့်​ တူညီလျှင်​ ​မေးမြန်း​သောပြဿနာသည်​ ထ​မြောက်​​အောင်​မြင်​ပါလိ်​မ့်​မည်​…
ယခုဟူးရားဇာတာမှာ ဟူးရားနံပါတ်​လဂ်​ရဲ့ CSL သည်​ ၄-ဟူးဖြစ်​ပြီး ဟူးရားအခါလဂ်​ရဲ့ လဂ်​စီး နက္ခတ်​ဖြစ်​​နေပါတယ်​… ထို့​ကြောင့်​ OK ပါ…
Dasa Looking Up
23.5. 2018 အထိ ရာဟုထူလ၊ ကိတ်​ဘုတ္တိဒသာ စားပါမယ်​…
(အစိုးရအ​နေနဲ့ အခက်​အခဲများကို ရင်​ဆိုင်​​ကျော်​လွှားရမယ့်​ ကာလဖြစ်​ပါတယ်​…)
23.5.2018 က​နေ 23.5. 2021 အထိ ​သောကြာဘုတ္တိဒသာစားမယ့်​ ကာလမှာ​တော့ အစိုးရအ​နေနဲ့ မိမိဖြစ်​ချင်​​သော ကိစ္စရပ်​များကို သက်​​တောင့်​သက်​သာ ​အေး​ဆေးစွာနဲ့ ​ကျော်​ဖြတ်​ယင်း သက်တမ်းပြည့်သွားပါလိမ့်​မယ်​…. No doubt!
အ​ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်​များကို​တော့ Sensitive Point ကျ​ရောက်​တဲ့ “သီတင်းကျွတ်​လ” ​တွေမှာ ပြုလုပ်​ပါဟု အကြံပြုယင်း….
Sayar Zar Ni (KP)
FB: Sayar Zar Ni
Previous တကယ်တိုက်မှာလား အမေရိကန်
Next မြန်မာ့စီးပွားရေး အလားအလာ (A KP Appraisal)